Akụkọ - Otu esi emegharị valvụ ụgbọ ala?
Akpaaka akụkụ engine valvụ ebe ọrụ na-arụ ọrụ siri ike, ịkpọtụrụ gas kpọmkwem, ọnọdụ kachasị ọkụ nke valvụ kpochapụrụ nwere ike iru 800 and, yana na ngwụcha nke usoro mmanu ahụ, yana ọrụ valvụ ahụ mgbe mmeghe na mmechi emeela ugboro ugboro, akụkụ valvụ ahụ dị mfe ịmepụta mmebi. Ya mere, ekwesiri itinye uche na akụkụ valvụ nke mmeghari ahụ, iji hụ na ọ dị na ọnọdụ ọrụ ọfụma.
1. Nyocha Valve na ndozi
(1) Lelee curvature nke valvụ isi na azuokokoosisi. Mgbe valvụ ahụ na-akwụsị ma ọ bụ na-eyi ya, mee mmezi, na uru mgbazi ga-abụ nke kacha nta. Ghichaa ihu valvụ ahụ.
(2) Dochie valvụ ahụ ma ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ nke ụgbọ ala engine valvụ bụ ihe na-erughị njedebe njedebe. Mgbe ị na-arụ ọrụ, nyochaa ngwụcha nke oghere ọ bụla maka mgbapụta, iyi, na ekwe.
(3) Lelee ebe ọrụ na mgbatị nke valvụ ọ bụla maka iyi, ọkụ, ma ọ bụ nrụrụ, ma dochie ma ọ dị mkpa.
(4) Jiri njedebe nke valvụ na-akwụsị njedebe: 0.1mm maka valve oriri, 0.1mm maka kpochapu valve; ọkọlọtọ uru nke ọkpụrụkpụ isi ọkpụrụkpụ: 1.0mn maka valvụ oriri, 1.5mm maka iyuzucha valvụ; njedebe nke ojiji: 0.7mm maka valvụ oriri, 1.0mm maka valve kpochapu.
(5) Jiri micrometer na V-frame iji tụọ eriri valvụ ahụ na-ehulata. A na-akwado eriri valvụ ahụ na osisi V abụọ dị anya nke 100 mm, mgbe ahụ, a na-atụle ntụgharị ahụ na 1/2 nke valvụ ogologo na micrometer. Ọ bụrụ na ọ gafere oke nwere ikike, ekwesịrị iji ntuziaka akwụkwọ ntuziaka dozie ya.
2. Mwepụ nke mgbakọ valvụ
Mgbe a gbakọtara ụgbọ okporo ígwè ahụ, mmiri ahụ nọ n'ọnọdụ ebuputara, ọ bụrụ na agbasasị ya n'ụzọ na-ezighi ezi, mmiri ahụ ga-apụta ma merụọ ahụ mmadụ ahụ, ya mere, ọ dị mkpa iji eriri mmiri pụrụ iche disassembler rụọ ọrụ ọkọlọtọ mgbe ị na-ekewapụ ụgbọ okporo ígwè, iji hụ na disassembly nke ụgbọ ala ụgbọ ala ụgbọ oloko dị mma. Onye na - ejide mmiri na - agbada ya na mmiri mmiri na - ewepu mmiri iji wepụ mkpọchi mkpọchi enwere ike wepu ya. Onye na - ejide mmiri na - eji nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ wee ruo mgbe opupu ihe ubi nọ n'ọnọdụ zuru oke zuru oke.
3. Dochie Valve Se Coils
Uzo a na-arụ ọrụ nke oche valve na-eji nwayọ nwayọ mgbe ọtụtụ ream ma ọ bụ egweri, nke na-emetụta njikọta nkịtị n'etiti valvụ na oche. Ọ bụrụ na ọrụ ọrụ nke oche valvụ bụ 1.5mm n'okpuru ala oche oche, a ga-edochi akwa olu akwa valvụ. mm, a ga-edochi olu akwa oche valvụ. Usoro ngbanwe: jiri ngwaọrụ pụrụ iche wepụta akwa olu akwa ochie, wee tinye akwa olu oche ọhụrụ na ndọtị 0. 0.75 ~ 0. 125 mm na oghere oghere na mmiri nitrogen tank mmiri na-ebelata 15 ~ 20 s. Ihe etinyere n'ime oche nke isi isi nke cylinder ahụ ka o wee kpoo ọkụ na ụlọ. N'aka nke ọzọ, kpoo oghere oche nke isi isi ahụ ihe dị ka 100 Celsius C site na ịmị ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ (omume siri ike: tupu ị kpoo isi isi isi ahụ, tinye ntụ ntụ ọcha na gburugburu oghere oche ahụ, wee kpoo ya ihe dịka 100 Celsius C mgbe ọcha ntụ ntụ na-acha odo odo), wee pịa mgbanaka oche ahụ ngwa ngwa ma mee ka ọ dị jụụ na ikuku.